“Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti tumsi lammiilee cimuu qaba” -Obbo Siraaj Fageessaa
“Olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti tumsi lammiilee cimuu qaba” -Obbo Siraaj Fageessaa Featured
Rakkoo nageenyaa biyyattii mudateen walqabatee mootummaan tarkaanfiiwwan gara garaa fudhataa jira.
Walga'ii koree raawwachiiftuu hojii ADWUI dhiyeenya guyyoota 17f adeemsifameen murtoowwan jajjaboo kanneen akka hidhamtoota siyaasaa hiikuufi wiirtuu mana hidhaa ‘maa’ikalaawwii’ jedhamu cufuun rakkoolee mudataniif fala barbaaduuf kan taasifameedha.
Akka ibsa korichaatti, namoota jeequmsa dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti uumamerratti hirmaataniifi walitti bu’iinsa daangaa Oromiyaafi Sumaalee Itoophiyaaf sababa ta’an seeratti ni dhiyaatu.
Kanaan raaayyaan ittisa biyyaa, poolisiin federaalaafi naannolee walta’insaan tarkaanfiin yakkamtoota seeratti dhiyeessuufi nageenya biyyattii tasgabbeessuu fudhachuu eegaluusaanii ibsameera.
Ministirri Raayyaa Ittisaafi Barreessaan Mana Maree Nageenyaa Biyyaalessaa Obbo Siraaj Fageessaa Roobii darbe ibsa kennaniin akka jedhanitti, labsiin yeroo hatattamaa biyyattiitti labsame ture erga ka’ee as iddoowwan tokko tokkotti rakkooleen nageenyaa mul’ate to’achuufi nageenya biyyaa bakka turetti deebisuuf manni marii nageenyaa hundaa’ee raawwii hojii baatii tokkoofi guyyoota 15f qorateera.
Kanaanis walitti bu’iinsota dhaabbilee barnootaa olaanaa biyyattii keessatti uumamaniifi naannolee Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa, akkasumas hiriira seeraan alaa gaggeeffamaa turan ija seeraatiin ilaalamuu ibsaniiru.
Kana malees, mirga nagaan socho’uufi nageenya lammiileerratti dhimmoota sodaa ta’an, tarkaanfii qaamolee nageenyaan fudhatameen sirraa’uu himanii, ta’us iddoowwan tokko tokkotti namoonni maqaa hiriiraatiin nageenya booressuuf socho’aa jiran ni mul’atuu jedhaniiru.
Rakkoon nageenyaa dhaabbilee barnoota olaanaa keessatti uumamee turee kan furame yoo ta’u, wayita ammaa hojiin baruu barsiisuu tasgabbiin adeemsifamaa jiraachuu eeraniiru.
Akka ministirichi jedhanitti, jeequmsi daangaa Oromiyaafi Somaalee Itoophiyaa irratti uumamee ture naannoleen lamaan haala gaafataniin humni waraanaa iddoowwan jeequmsi jiru seenuun seenuun tasgabbii uumaa akka jiranis himaniiru. Jeequmsa biyyattiitti uumamee ture hammeessuuf meeshaaleen seeraan alaa gara biyya keessaa osoo galuuf jedhanii to’achuun danda’amuusaa ibsanii, kunis hirmaannaa lammiileetiin milkaa’eera jedhaniiru.
Tataaffii mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuuf taasisaa jiru keessatti lammiileen biyyattii marti qooda olaanaa waan qabaniif, keessumaa dargaggootni ciminaan nageenyaaf dhimammuu qabu jedhaniiru.
Torban kana/This_Week 43566
Guyyaa mara/All_Days 1468346